MicroG YouTube ကို Vanced APK ဖိုင်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်
MicroG YouTube ကို Vanced APK ကိုဒေါင်းလုပ်: ဟေ့ကောင်တွေ, သငျသညျနောက်ခံပြန်ဖွင့်ခြင်းနှင့် YouTube ပေါ်မှာပိတ်ဆို့ခြင်းကြော်ငြာခွင့်ပြု app များကိုရှာဖွေနေကြသည်? ဒါကြောင့်ပါလျှင်, ထို့နောက်သင်သည်လက်ျာစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဆင်းသက်ခဲ့ကြ. ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့, ကျနော်တို့က Android ဖုန်းတွင် YouTube ကို Vanced Apk ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်သင်မည်သို့ပြပါနဲ့ Install လိမ့်မယ်.
ကျနော်တို့ YouTube ကို Vanced Apk နှင့်အတူဒီမှာပါ. ငါတို့ရှိသမျှသည်ကြော်ငြာဒါနှောင့်အယှက်ကြောင်းဝန်ခံနှင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ chat စဉ် Youtube ကိုအပေါ်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကို play လို, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ဂိမ်းကစား.
ငါသည်သင်တို့အဘို့ကောင်းသောသတင်းတို. YouTube အအဆင့်မြင့် application ကိုသင်နောက်ခံတွင် YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုဆော့ကစားပေးနိုင်ပါတယ်. ဒါဟာအစကြော်ငြာတွေပိတ်ဆို့ဖို့စွမ်းရည်ကမ်းလှမ်း.
YouTube အ Vanced app ကိုတရားဝင် YouTube app ကိုတစ်ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်. ယခင်က, က iYTBP ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည် – ထိုးသွင်း YouTube ကိုနောက်ခံပြသမှု.
YouTube ကို Vanced ကဘာလဲ:
YouTube ကို Vanced တရားဝင် YouTube app ကိုတစ်ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်. ယခင်က, က iYTBP ဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည် – ထိုးသွင်း YouTube ကိုနောက်ခံပြသမှု. ဒါဟာ Master_T နေဖြင့်ဖြန့်ချိခဲ့သည်. သငျသညျ module တွေကြိုးစားခဲ့ပါတယ် အကယ်., သငျသညျ YouTube ကို Vanced ၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးကြိုးစားခဲ့ပါတယ်. Youtube ကို Vanced ၏စိတ်ကူး YBP ထံမှလာ.
YouTube ကို Vanced APK ကိုကြော်ငြာပိတ်ဆို့ခြင်းများကဲ့သို့အံ့သြဖွယ် features တွေကမ်းလှမ်း, နောက်ခံပြန်ဖွင့်, နှင့်ပိုပြီး. ကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်ဒီ app ကိုပို features တွေမျှဝေပါတယ်
အကြံပြုထား: Lucky Patcher Download နှင့် GbWhatsapp ကို download လုပ်ပါ.
Youtube ကိုအဆင့်မြင့် apk ၏အင်္ဂါရပ်များ:
ကြော်ငြာတွေကို Block: – အင်္ဂါရပ်ပိတ်ဆို့ခြင်းကြော်ငြာများအသုံးပြုသူနှောင့်အယှက်ကိုကြော်ငြာမပါဘဲဗီဒီယိုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြု.
နောက်ခံဂီတကိုနားထောင်: – အဆိုပါ Youtube ကို app ကိုလျော့ချသည့်အခါဒါဟာအသုံးပြုသူသီချင်းများကိုနားထောင်ခွင့်ပြု.
PIP mode ကို (ရုပ်ပုံ mode မှာရုပ်ပုံ): – ရုပ်ပုံ mode မှာရုပ်ပုံကိုလည်း PIP mode ကိုဟုခေါ်သည်. အဆိုပါ PIP အင်္ဂါရပ် floating screen ပေါ်မှာအစားအုပ်စုခွဲ mode မှာအသုံးပြုသူတစ်ဦးလက်ပတ်နာရီဗီဒီယိုများကူညီပေးသည်. အခြားအက်ပ်ထဲမှာ browsing နေစဉ်ဗီဒီယိုများလျော့ချဗားရှင်း switched နေကြတယ်.
ဗီဒီယိုကြည်လင်ပြတ်သားမှု: – YouTube ကို Vanced apk user က Youtube ကိုအပေါ်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုရန်စံကဗီဒီယို resolution ကို select လုပ်ပါသို့မဟုတ်မသတ်မှတ်ခွင့်ပြု.
အကွောငျး: – အဆိုပါ Vanced app ကို app ကို၏အသွင်အပြင်နှင့်ခံစားမှုပြောင်းလဲနိုင်သည်ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုများပါရှိသည်.
ထပ်ခါတလဲလဲကဗီဒီယို: – သငျသညျထပ်ခါထပ်ခါဗွီဒီယိုတစ်ခုကစားနိုင်ပါတယ်. ထပ် mode မှာဗီဒီယိုရုံသတ်မှတ်ထား.
ဗီဒီယိုကိုမြန်နှုန်း: – သင်ကဗီဒီယိုပြန်လည်ပြသခြင်းမြန်နှုန်းကိုချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်.
ကကြီးမြတ် app ကိုမဟုတျပါဘူး? ကျနော်တို့ YouTube ကိုအဆင့်မြင့် app ကိုအပေါငျးတို့သ features တွေ shared. မည်သည့်အချိန်ပိုမိုဆုံးရှုံးမပါဘဲ, ကျနော်တို့ဒေါင်းလုဒ်ကဏ္ဍကိုသွားပါ.
ဤတွင်ကျနော်တို့နောက်ဆုံးပေါ် Youtube ကို Vanced Apk shared 2018. ဒီ app ဟာ Play Store မှာမရရှိနိုင်.
non အမြစ်တွယ် devices များ: YouTube ကို Vanced Apk Download
non အမြစ်တွယ် devices များ: – MicroG Apk Download
စီမံခြင်းမပြုရသေးသော Android ထုတ်ကုန်အပေါ် YouTube ကိုအဆင့်မြင့် APK ကိုတပ်ဆင်ရန်
ဒီအပိုင်းမှာ, ကျနော်တို့ non-အမြစ်တွယ်စက်ပစ္စည်းတွင် YouTube ကိုအဆင့်မြင့် Apk ကို install လုပ်ဖို့သင်မည်သို့ပြသပါလိမ့်မယ်. ဟုတ်ကဲ့, သင်မှန်ကိုကြား. သငျသညျစီမံခြင်းမပြုရသေးသောဖုန်းများပေါ်တွင် YouTube အဆင့်မြင့် app ကို install လုပ်နိုင်ပါတယ်.
ထိုကိစ္စတွင်, သငျသညျ MicroG လို့ခေါ်တဲ့နောက်ထပ် app ကို download လုပ်ပြီး install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်. ဒါဟာသင့် Google အကောင့်ကို sign ကူညီပေးပါမည်. နောက်ထပ် ado မပါဘဲ, ကျနော်တို့ကလမ်းညွှန်သို့ခုန်.
လှမ်း 1: – ပထမဦးစွာသင်သည် YouTube app ကို၏ updates များကို uninstall လုပ်ဖို့ရှိသည်နှင့်လည်း Play Store မှာအလိုအလျောက် update ကို disable.
လှမ်း 2: – YouTube ကို Vanced APK အပေါ်ကဒေါင်းလုပ်ဧရိယာကနေ Download လုပ်ပါ.
ဆက်လက်မလုပ်ဆောင်မီ, သင်ဖွင့်ရမည် “အမည်မသိအရင်းအမြစ် Enable” သင့်ရဲ့ smartphone ကို setting ကိုအတွက် option ကို.
သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းတွင်. ပွင့်လင်း setting ကို
လုံခြုံရေး Options ကို setting ကိုအတွက်, ကိုထိပုတ်ပါနဲ့ကိုထိပုတ်ပါ.
သငျသညျ app များကိုအမည်မသိရင်းမြစ်များမှ install လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုလျှင်တစ်ဦးကသတိပေးပေးတဲ့ dialog မေးတယ်.
လှမ်း 3: – အခုတော့ကအခြားသာမန် apk ဖိုင်တွေကဲ့သို့အဆင့်မြင့် app ၏ YouTube ကိုဗားရှင်းကိုထည့်သွင်း.
လှမ်း 4: – သင့်ရဲ့ Android Phone ကိုအပေါ် MicroG Apk Download လုပ်ပြီး install.
လှမ်း 5: – နောက်တစ်ခု, အဆိုပါ MicroG app ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သင်၏ Google အကောင့်ကို sign.
သိကောင်းစရာများ: – သင့်အကောင့်သို့ logging ပြီးနောက်. ထိုအခါက Settings ကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်သင်နှစ်သက်တဲ့အရောင်ကိုရွေးပါ> အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိမှုများ> layout က Settings.
ဒါပဲ!! အခုတော့ကြော်ငြာမပါဘဲဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သီချင်းနားထောင်လို့ရပါတယ်. ရရှိနိုင်ပါကပိုအများအပြား features တွေရှိပါတယ်. က Explore နှင့် Youtube ကိုအဆင့်မြင့် app ကိုသင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး features တွေကိုအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ.
Magisk Root လုပ်ပြီးသား device များအတွက် Download:
ARM64: – ဒေါင်းလုပ်
က ARM X86: – ဒေါင်းလုပ်
က ARM: – ဒေါင်းလုပ်
check လုပ်ထားရပါမည်: Kingroot Download Spotify ပရီမီယံ Download
MicroG - YouTube ကို Vanced YouTube ကို Vanced အားဖြင့်
MicroG YouTube ကို Vanced APK ကိုကဒီမှာ Download လုပ်ပါ
ဗားရှင်း: 0.2.4-105-gf289a13-ညစ်ပတ် (11675464)
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: စက်တင်ဘာလ 12, 2018
ဖိုင်အရွယ်အစား:3mb
MicroG Download - YouTube ကို Vanced APK ကို
Ludo STAR : 2018 (နယူး) APK ကိုဒေါင်းလုပ် – Android အတွက်အခမဲ့ဘုတ်အဖွဲ့ GAME
အခမဲ့ဒေါင်းလုပ် Psiphon Pro ကို APK ကို v163 ++ | လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
အခမဲ့ Boom သဲသောင်ပြင်ကို Hack Modded APK ကို APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
YouTube ကို VR APK ကိုဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
MeetMe: chat & တွေ့ဆုံနယူးပြည်သူ့ APK ကိုဒေါင်းလုပ် – လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Smule APK ကိုဒေါင်းလုပ်ခြင်းဖြင့်သီချင်းဆိုကြလော့ | မိုဘိုင်းအတွက်အကောင်းဆုံး Apps ကပ
Android အတွက် iRoot – APK ကိုဒေါင်းလုပ် – …
ကခုန်လိုင်း APK ကိုဒေါင်းလုပ် – အခမဲ့ Arcade…
Android အတွက်ဒါဟာခုတ် – APK ကိုဒေါင်းလုပ်…
CyberGhost VPN ကို APK ကိုဒေါင်းလုပ် | အကောင်းဆုံး Apps ကပ…
PPSSPP ရွှေ emulator ရီးရဲလ်အခမဲ့ APK ကိုဒေါင်းလုပ်…